Views Module | mmshare
Submitted by everlearner on Fri, 01/11/2013 - 10:51
Drupal ရဲ့ Views module ဟာ Drupal site တိုင်းအတွက် အလွန်အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာ အားလုံး သိပြီးသားပါ။ Drupal stie တိုင်းမှာ မပါရင် မပြီးတဲ့ module တစ်ခုဖြစ်လို့ နောင်ထွက်လာမယ့် Drupal 8 မှာ တစ်ခါတည်း ပေါင်းထည့်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။ Views ကို ဒီအတိုင်း သုံးတာထက်စာရင် Views plugin module လေးတွေနဲ့ တွဲသုံးတာက ပိုထိရောက်ပါတယ်။ ပိုပြီးတော့ အစွမ်းထက်လာပါတယ်။ ဉပမာ − Slideshow တွေ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Views slideshow ကို ထပ်ပေါင်းထည့်ပြီး လိုချင်တဲ့ Slideshow တွေ ဖန်တီးတာမျိုး
Read more about အသုံးဝင်တဲ့ Views Hacks Module
How to Use Node Reference with Contextual Filter ?
Submitted by NWAung on Tue, 04/24/2012 - 11:03
Drupal မှာ မတူတဲ့ Content Type နှစ်ခုကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆက်စပ် ယှဉ်တွဲ ဖော်ပြချင်တယ် ဆိုရင် လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲက အလွယ်ဆုံး၊ အရှင်းဆုံးနဲ့ အလုပ်အဖြစ်ဆုံးနည်းကတော့ Node Reference, Views နဲ့ Contextual Filter တွေကို အသုံးပြုတဲ့ နည်းပါ။
ဒီဆောင်းပါးမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းလုပ်ကြည့်မယ်။ ဘောလုံးအသင်းတွေကို စိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရမယ်။ မန်ယူ၊ အာဆင်နယ်၊ မန်စီးတီး အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ နောက်ပြီး ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းစီမှာလည်း ဘောလုံးသမားတွေကို စိတ်ကြိုက်ထည့်မယ်။ ပြီးရင် ဘောလုံးသမားတွေကြီးပဲ ဖော်ပြမယ့် Page ရယ်၊ ဘောလုံးအသင်းတွေကြီးပဲ ဖော်ပြမယ့် Page ရယ်နှစ်ခု လိုချင်တယ်။ နောက်ပြီး မန်ယူအသင်းရဲ့ Page ကိုကြည့်ရင် မန်ယူအသင်းတွင် ပါဝင်သော ကစားသမားများဆိုတာကို ဖော်ပြပေးရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်တွေ့ စလုပ်ကြည့်ရအောင်။
Read more about How to Use Node Reference with Contextual Filter ?
Submitted by everlearner on Sun, 12/04/2011 - 10:25
Drupal Views module အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဆက်ပြီး ပြောပြချင်တာကတော့ Druapl6မှာ အသုံးပြုတဲ့ Views2(Views Module Version 2) အကြောင်းပါ။ Views ကို ပထမဆုံး စသုံးတဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက်တော့ UI (User Interface) က တကယ့်ကို မျက်စိနောက်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ရုတ်တရက် ဘယ်ကစလို့ ဘယ်မှာ အဆုံးသတ်ရမယ် ဆိုတာ မသိလောက်အောင်ကို ရွေးချယ်စရာတွေ စုံလင်များပြား ရှုပ်ထွေးတဲ့ အတွက်ပါ။
Views2မှာ ပါတဲ့ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ Overview ကို အောက်က ပုံမှာ အမှတ်စဉ်ထိုးပြီး အသေးစိတ် ရှင်းပြထားပါတယ်။ ဒီပုံမှာ Field တစ်ခုချင်းစီကို Edit လုပ်တဲ့ အခါ မြင်ရတဲ့ အနေအထား မပါသေးပါဘူး။ Drupal7မှာ သုံးထားတဲ့ Views3ဟာလည်း၊ Views2ကို အခြေခံထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အခုဆွေးနွေး ထားတာတွေကို လေ့လာရင် နောက်ပိုင်း Views3ကို လေ့လာဖို့အတွက်လည်း အခြေခံ ရသွားပါလိမ့်မယ်။
Read more about Getting Started in Drupal Views2Module - Display, Basic, Page and Block Settings
Read more about Introduction to The Power of Drupal Views Module